Were ezumike | Martech Zone
Na Mọnde, Nọmba 13, 2012 Sunday, October 4, 2015 Jenn Lisak Golding
Amaghị m banyere gị, ma ịnọ na ahịa ọgbara ụwa mgbe niile nwere m n'ihu kọmputa ma ọ bụ na tebụl m. O doro anya na nke ahụ adịghị mma maka ahụ anyị, dị ka nyocha emere site na Learnstuff.com.
Ndị mmadụ na-etolite ihe dị ka ugboro 18 kwa nkeji. Ma mgbe ị na-elegide anya na kọmputa, ị ga-enwu gbaa anya ugboro asaa, nke nwere ike ibute ọrịa Ọrịa Computer. 7 n'ime ndị mmadụ 9 na-etinye ihe karịrị 10 awa na-aga n'ihu na-ele anya na ihuenyo kọmputa, na iji òké maka ihe karịrị 2 awa n'izu na-eme ka ohere nke ọrịa carpal tunnel na-abawanye site na 20%. Na mkpokọta, ọ dị ka ịlele na kọmpụta nke kọmputa adịghị mma maka ahụike anyị.
Ma oge ezumike nwere ike inyere aka hie ụra anyị, anya anyị, azụ anyị na omume anyị. Lelee ụfọdụ ozi ndị ọzọ na infographic a dị mma maka otu esi echedo ahụike gị mgbe ị na-arụ ọrụ na kọmputa ụbọchị niile!
Tags: ComputerỌrịa Ọrịa ComputerocheIhuenyoWere ezumike
Ọrụ Onwe na Search Enjini
Nov 13, 2012 na 10:15 AM
Ndụmọdụ dị ukwuu!
ka ọ dị
Jenụwarị 18, 2013 na 1:26 PM
Ndewo jenn, amaara m na nke a bụ ụdị ebe a, mana enwere m ike ịmara onye na-ese ihe nkọwa nke nkọwa a maka ntinye a? Daalụ nke ukwuu !
Jenụwarị 18, 2013 na 3:43 PM
Ga-elerịrị ndị folks anya na Learnstuff @tanxiuwen: disqus! Ha bipụtara infographic ahụ - ma rụọ nnukwu ọrụ!